Daawo: Wafdi Balaaran oo Galmudug ka socda oo Nairobi lagu so dhaweeyay+Yaa horkacaayo wafdiga iyo Ujeedka Socdaalkooda – Kismaayo24 News Agency
by Tifaftiraha K24 10th July 2016 10th July 2016 163
Munaasabad balaaran oo lagu soo dhaweynayay wafdi uu horkacayay gudoomiyaha baarlamanka Dowlad gobaledka Galmudug mudane Cali Gacal casir oo howlo shaqo u jooga Kenya, ayaa lagu qabtay magaalada Nairobi.
Xaflada Soo dhawaynta ayaa waxaa soo qaban qaabiyay jaaliyada Soomaliyeed ee ku dhaqan dalka Kenya, waxaana ka qayb galay Siyaasiyiin Aqoonyahano ururada haweenka, dhalinyarada iyo xubno kale oo matalayay qeybaha kala duwan ee bulshada kasoo jeeda deeganada Galmudug ee ku dhaqan magalada Nairobi.
Farxiyo Cabdulahi sheekh doon oo ka tirsan baarlamanka Galmudug oo ka mid ahayd xubnihii munasabada ka hadlay ayaa waxa ay sheegtay in deeganada Galmudug ay xiligan nabad yihiin isla markaana loo baahan yahay in loo midoobi hormarinta deeganada Galmudug.
Gudomiyaha Baarlamanka Galmudug Cali Gacal Casir oo gaba gabadii munasabada qudbad dheer ka jeediyay ayaa waxa uu ka warbixiyay waxyaabihii u qabsoomay galmudug isagoona ugu baaqay jaaliyada soomaaliyeed ee ku dhaqan kenya inay garab istaagaan dowlad gobaleedka Galmudug.
War hada: Maxaadan ogeyn oo saakay laga soo sheegaya qeybo kamid ah Magaalada Muqdisho???
admin 27th February 2015 28th August 2015